November 2020 - Warar Sugan - Soomaaliya iyo caalamka
Somaliya ayaa amartay inuu dalka degdeg uga baxo ergaygii Keenya ka joogay dalka Soomaaliya kadib markii lagu eedeeyey inuu faragelin ku sameeyey arrimaha doorashada dalka Soomaaliya agaar ahaan Jubbaland. Somaliya waxay kaloo u yeeratay safiirkeedii […]
Madaxweynaha dhowaanla soo doortay ee Maraykanka Joe Biden ayuu dhaawac lug ka soo gaaray kadib markii uu kufay isagoo la ciyaarayey eeygiisa Major shalay. Dhaqaatiirta kabay Biden ayaa sheegay in aanu todobaadyada soo socda xiran […]
Ugu yaraan lix qarax ayaa laga maqlay caasimadda dalka Eritrea kadib markii maamulka Tigray ee laga adkaaday uu madaafiic ku garaacay magaaladaasi. Kooxaha Tigray ayaa ku eedeeyey dalka Eritrea in ay dowladda Itoobiya gacan ku […]
Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Ali ayaa sheegay maanta in ay ciidamada dowladda federaalka ee Itoobiya ay gebi ahaanba la wareegeen gacan ku haynta caasimadda Maamulka Tigray, Mekelle. Maamulka Tigray ayaan isagu ka hadlin arrintaasi […]
Ururka Alshabaab ayaa dusha u ritay masuuliyadda qarax ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha Aadan Cadda ee Magaalada Muqdisho Xalay oo ay ku dhinteen dad farabadani. Qarax oo uu fuliya qof wax yaabaha qarxa isku soo […]
Sii hayaha Xogahay gaashaandhigga dalka Maraynaka Christopher C. Miller ayaa booqasho qarsoodi ah ku tegay magaalada Muqdisho dalka Soomaaliya. Christopher C. Miller ayaa magaalada Muqdisho kula kulmay saraakiisha ciidamada Maraykanka ee jooga Soomaaliya iyo masuuliyiin […]
Mogaidhsu (Hornnews24) – Duqa magaalada Muqdisho, Cumar Filish, ayaa ku hanjabay inuu dilayo amaba uu xabsi ku gurayo musharaxiinta mucaaradka ah ee madaxtinimada Soomaaliya. Arrintaan ayaa ka dambaysay kadib markii shir ay yeesheen midowga musharixiinta […]
Sarkaal sare oo ka tirsan Hay’adda Sirdoonka Maraykanka ee CIA ayaa lagu dilay dalka Soomaaliya sida uu qoray wargayska New York times. Sarkaalkaan ayaa la sheegay inuu yahay kii 136aad eek u dhintay howlgal hay’adda […]
Ugu yaraan 5 askari ayaa Arbacadii ku dhimatay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar lagula eegtay gaari ay saarnaayeen duleedka Magaalada Muqdisho. Weerarkaan oo ka dhacay deegaanka Ceelasha biyaha ayaa ahaa miino dhulka lagu […]
Ciyaaryahankii Maradona oo wadnahoo istaagay u dhintay
Ciyaaryahankii kubadda cagta ee Diego Maradona ayaa dhintay kadib markii uu wadnuhu istaagay arabacadii, sida uu sheegay afhayeenkiisu. Madaxweynaha Argentine President Alberto Fernandez ayaa ku dhawaaqay sadex maalmood oo baroorasho ah kadib dhimashada Maradona. […]
ararka ka imaanaya deegaanka Galmudug ayaa muujinaya in shalay dagaal magaalada Bacaadwayn ku dhex maray ciidamada dowladda iyo ku Alshabaab ay ku dhinteen ku dhowaad 60 askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda. Maamulka Galmudug oo [...]
omaliya ayaa amartay inuu dalka degdeg uga baxo ergaygii Keenya ka joogay dalka Soomaaliya kadib markii lagu eedeeyey inuu faragelin ku sameeyey arrimaha doorashada dalka Soomaaliya agaar ahaan Jubbaland. Somaliya waxay kaloo u yeeratay safiirkeedii [...]
adaxweynaha dhowaanla soo doortay ee Maraykanka Joe Biden ayuu dhaawac lug ka soo gaaray kadib markii uu kufay isagoo la ciyaarayey eeygiisa Major shalay. Dhaqaatiirta kabay Biden ayaa sheegay in aanu todobaadyada soo socda xiran [...]
gu yaraan lix qarax ayaa laga maqlay caasimadda dalka Eritrea kadib markii maamulka Tigray ee laga adkaaday uu madaafiic ku garaacay magaaladaasi. Kooxaha Tigray ayaa ku eedeeyey dalka Eritrea in ay dowladda Itoobiya gacan ku [...]
a’iisal Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Ali ayaa sheegay maanta in ay ciidamada dowladda federaalka ee Itoobiya ay gebi ahaanba la wareegeen gacan ku haynta caasimadda Maamulka Tigray, Mekelle. Maamulka Tigray ayaan isagu ka hadlin arrintaasi [...]
Wararkii hore Select Month December 2020 November 2020 September 2020 August 2020 July 2020 June 2020 May 2020 April 2020 March 2020 February 2020 January 2020 December 2019 November 2019 October 2019 September 2019 August 2019 July 2019 June 2019 May 2019 April 2019 March 2019 February 2019 January 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 July 2018 June 2018 December 2017
Total Visits: 132,239